Ireo mpilatsaka antsitra-po mihetsika eto Madagasikara | Grandir à Antsirabe
19 ka hatramin’ny 25 taona izy ireo no nanapa-kevitra hanolo-tanana ho an’ny fikambanana eto an-toerana nandritry ny fotoam-pialan-tsasatra, alohan’ny handraisana indray ny fidirana ho an’ny taom-pianarana eny amin’ny ambaratonga ambony. Larissa, Murielle ary Rose dia nahafantatra ny fikambanana tamin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera, ny pejy Facebook-n’ny fikambanana ary ny sasany amin’izy ireo dia nanaraka fampianarana momban’ny lalànan’ny fikambanana izay nahatonga azy ireo hifandray amin’ny vondrona.
Dingana voalohany mankany amin’ny tontolon’ny fikambanana
Ho azy ireo, ny fandraisan’andraikitry ny fikambanana amin’ny fiarovana ny ankizy eny amin’ny lalana dia ahafahany mahazo traik’efa lehibe. Murielle,izay maniry ny hanangana fikambanana aorian’ny fianarany, dia mandray izao lalana izao ho fomba iray ahafahany mametraka sahady dingana iray makany amin’izany tontolon’ny fikambanana izany.
Ireo vehivavy tanora ireo dia mbola tsy nanana traik’efa tamin’ny filatsahana antsitra-po. Nandritry ny hetsika voalohany nataon’izy ireo dia mbola nisy ny fihafahafana fa rehefa nandeha ny fotoana tao anatin’izay filatsahana an-tsitra-po izay dia tafiditra tsara tao anatin’ny asa fanentanana izay ataon’ny fikambanana isan-kerinandro izy ireo toy ny, DanseLaRue, ny BiblioPousse ary ny CinéRue.
“ireo mponina dia vavolombelona avokoa amin’ny fanilikilihana ireo ankizin’ny lalana kanefa vitsy no mandray andraikitra mba hanovana izany”
Nandray andraikitra teo anivon’ny fikambanana izy ireo satria ny ankizy miaina eny amin’ny lalana dia misy tokoa eto Antsirabe. Ireo mponina dia vavolomb elona avokoa amin’ny fanilikilihana ireo ankizin’ny lalana kanefa vitsy no mandray andraikitra mba hanovana izany. Mahafantatra ny fiainan’ireo ankizy ireo ny rehetra, ary ireo vehivavy milatsaka antsitra-po ireo dia mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny hetsika fanentanana ho an’ny mponina amin’izany zava-mitranga mavesatra izany.
Mandritry ny fihetsiketsehana atao, ireo mpilatsaka antsitra-po ireo dia mitondra fanohanana tokoa ho an’ireo mpiasa ara-tsosialy eto amin’ny fikambanana. Ny fahavitrihana sy ny tolo-tanana ataon’izy ireo dia mampizotra ara-dalana ireo hetsika fanentanana atao.
Amin’izao fotoana izao, ny fikambanana eto an-toerana dia ahitana mpilatsaka antsitra-po miisa 6 ho an’ny hetsika fanentanana amin’ny andavan’andro.